शरीर विज्ञान : कसरी हामी बुढो हुन्छौं ? – Newsrekha
न्यूजरेखा । १९ श्रावण २०७८, मंगलवार ०८:१९ बजे
मान्छेलाई बुढ्यौलीसँग डर लाग्छ । जब–जब शरीर बुढ्यौलीतर्फ धकेलिदै जान्छ, शरीरका अंगहरु शिथिल हुँदै जान्छन् । यसले उर्जा र उत्साह पनि घटाउँछ । अनेक रोगहरुले च्याप्न थाल्छ । त्यसैले मान्छे सधै जवान बन्न चाहन्छ ।
तर, बुढ्यौली एक शारीरिक प्रक्रिया हो । जन्म र मृत्यु जसरी निश्चित छ, उसैगरी बुढ्यौली पनि । आजको बालक भोलि बुढ्यौलीबाट गुज्रिनै पर्छ । यद्यपि कोही चाडै बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्छन्, कोही ६५–७० बर्षसम्म पनि जवान दिन्छन् । आखिर के कारणले हामी चाडै बुढो हुन्छौं ? विज्ञहरु भन्छन्, ‘यसमा हाम्रो वंशानुगत गुण र जीवनशैली जिम्मेवार छ ।’
हाम्रो डिएनए एक किसिमको जेनेटिक कोड हो जुन कोषको बीच सञ्चारित हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा यो जेनेटिक कोडको संरचनामा गडबड हुन सुरु हुन्छ । विस्तारै विस्तारै यो कोषमा जम्मा हुन सुरु हुन्छ ।
यो प्रक्रियालाई आनुवांशिक अस्थिरताको रुपमा मानिन्छ र यो विशेष रुपले त्यतिखेर प्रासंगिक हुन्छ जब डिएनएले स्टेम कोषहरुलाई प्रभावित गर्छ ।
वंशाणुगत अस्थिरताले स्टेम कोषहरुको भूमिकालाई खतरामा पार्न सक्छ । यदि अस्थिरता बढेमा यो एक क्यान्सरमा पनि परिवर्तन हुन सक्छ ।
क्रोमोजोम्स कमजोर हुने
हरेक डिएनए शुत्रको अन्तिम छेउमा क्याप जस्तो संरचना हुन्छ जसले हाम्रो क्रोमोजोमलाई सुरक्षित राख्छ । यसको बिल्कुल त्यस्तै संरचना हुन्छ जसरी हाम्रो जुत्ताको फिताको अन्तिम भागमा एक प्लाष्टिकको क्याप लगाइएको हुन्छ ।
यसलाई टेलोमर्स भनिन्छ । हाम्रो उमेर जति जति बढ्दै जान्छ यो क्यापरुपी संरचना हट्न थाल्छ र क्रोमोजोमको सुरक्षा कम हुँदै जान्छ । यसै कारणले समस्या पैदा हुन सक्छ ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार टेलोमर्सको संरचनामा जब गडबडी आउँछ त्यतिखेर कैयौं रोगहरु हुने खतरा बढ्छ । यसको कारणले फोक्सोसँग जोडिएका समस्याहरु र एनिमियाको खतरा बढ्छ । यी दुवै रोग शरीरको प्रतिरक्षासँग जोडिएका गम्भिर समस्या हुन् ।
कोषहरुको व्यवहार प्रभावित हुन्छ
हाम्रो शरीरमा एक विशेष प्रकारको प्रक्रिया हुन्छ जसलाई डिएनए एक्सप्रेसन भनिन्छ । जसमा कुनै एक कोषमा रहेको हजारौं जिन्सले त्यो कोषलाई के गर्ने हो भनेर तय गर्छन् ।
त्यो कोषलाई छालावाल कोषको रुपमा काम गर्नु पर्ने हुन सक्छ वा मस्तिस्कको कोषको रुपमा । तर, समय र जीवनशैलीले यी निर्देशनलाई बदल्न सक्छ । यस्तोमा कोषहरुले पनि आफूलाई तय गरिएको व्यवहारभन्दा फरक किसिकले व्यवहार गर्न सक्छन् ।
कोषहरुको नविनीकरण क्षमता सकिन्छ
हाम्रो कोषहरुमा क्षतिग्रस्त घटकको संचयलाई रोक्नको लागि शरीरमा नविनीकरणको क्षमता हुन्छ तर, बढ्दो उमेरसँगै यो क्षमता विस्तारै विस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
यस्तोमा कोषहरुमा बेकार वा विषालु प्रोटिन जम्मा हुन्छ, जुन कैयौंपटक अल्जाइमरको कारण बन्छ । कैयौं पटक यसको कारणले पार्किन्सन्स र मोतिबिन्दुको खतरा पनि बढ्छ ।
कोषहरुले मेटाबोलिज्म नियन्त्रण गुमाउँछन्
बढ्दो उमेरसँगै कोषहरुले चिल्लो र चिनीको तत्वलाई सोस्ने क्षमता गुमाउँछन् । यसैको कारण धेरै मानिसलाई उमेर बढ्दै जाँदा मधुमेहको समस्या हुन्छ ।
बढ्दो उमेरमा जो मानिसलाई मधुमेहको देखिन्छ उनीहरुमा विशेष रुपले यो कारणको असर हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा शरीरले ती सबै पोषक तत्वलाई ग्रहण गर्न सक्दैन जुन उनीहरुले खान्छन् ।
माइटोकन्ड्रियाले काम गर्न बन्द गर्छ
माइटोकन्ड्रियाले शरीरलाई उर्जा प्रदान गर्ने काम गर्छ तर, बढ्दो उमेरमा यसले आफ्नो क्षमता गुमाउन थाल्छ । यो कमजोर हुँदै जाँदा डिएनएमा पनि नकरात्मक असर पर्छ ।
गत जुनमा विज्ञान पत्रिका ‘नेचर’मा प्रकाशित भएको एक अध्ययनमा दावी गरिए अनुसार वैज्ञानिकले माइटोकन्ड्रियालाई रिस्टोर गरेर मुसामा चाँयालाई टाढा गरिदिएका छन् ।
स्टेम सेलले आफ्नो क्षमता गुमाउँछ
उमेर बढ्दैजाँदा कोषहरुको पुनरुत्पादक क्षमतामा कमी आँउछ । स्टेम कोषहरु थाक्न लाग्छन् । हालै गरिएका अध्ययनहरुबाट स्टेम कोषहरुको कायाकल्पले बढ्दो उमेरको शारीरिक लक्षणहरुलाई अगाडि आउनबाट रोक्न सक्ने तथ्य पत्ता लागेको छ ।
कोषहरु एकअर्कासँग सम्पर्क बन्द हुन्छ
कोषहरु सँधै एक अर्कासँग सम्पर्कमा रहन्छन् तर, जति जति उमेर बढ्दै जान्छ उनीहरुको यो आपसी सम्पर्क घट्न थाल्छ । उनीहरु बीच सम्पर्क नहुनाको कारण शरीर सुन्निन थाल्छ ।
यसको नतिजास्वरुप यो रोगजनक र घातका कोषहरुप्रति सक्रिय हुँदै । सेरानोका अनुसार हुन त यो एक यस्तो प्रक्रिया हो जसलाई रोक्न सकिँदैन तर एक स्वस्थ जीवनशैलीले यसको प्रभावलाई जरुर कम गर्न सक्छ ।